Walaalka la dhashay Higuain oo sheegay in Ronaldo uu ku raaxeysan doono Juventus hadii uu u dhaqaaqo – Gool FM
Walaalka la dhashay Higuain oo sheegay in Ronaldo uu ku raaxeysan doono Juventus hadii uu u dhaqaaqo
(Juventus) 05 Luulyo 2018. Nicola Higuain oo ah walaalka la dhasshay xidiga kooxda Juventus ee Gonzalo Higuaín isla markaana ah wakiilkiisa ayaa xaqiijiyay ayaa sheegay in imaatinka Cristiano Ronaldo ee kooxda Bianconeri ay noqon doonto wax aad u wanaagsan.
Nicola Higuain ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in hadii ay dhanka weerarka kooxda Juventus ka wada ciyaaraan xidigaha Higuain iyo Cristiano Ronaldo ay noqon doonto mid ay ku raaxeysan doonaan.
Cristiano Ronaldo ayaa lahadal hayaa inay suuragal noqon karto in uu u dhaqaaqo kooxda reer Talyaani ee Juventus, maadaama aan wali la xaqiijin sida uu noqon doono mustaqbalkiisa kooxda Real Madrid tan iyo finalkii Champions League.
“Gonzalo Higuaín wuxuu kaga soo garab ciyaaray Cristiano Ronaldo kooxda Real Madrid, mana uusan ii sheegin in arintaas ka wada hadleen iyo inkale”.
“Imaatinka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus iyo in ay dhanka weerarka ka wada ciyaaraan Higuaín, waxay noqon doontaa arin aad u wanaagsan”.
“Waxay si wada jir ah u soo wada ciyaareen dhowr kulan, si wanaagsan ayayna isku fahan san yihiin labaduba, waxay noqon doontaa dharbaaxi xoogan, hadii ay Juventus ku guuleysano saxiixa Ronaldo, waana arin aad u wanaagsan”.
Cristiano Ronaldo ayaa la filayaa inuu ugu soo dhaqaaqi doono kooxda reer Talyaani ee Juventus aduun dhan 100 million euros wuxuuna sanadii mushaar ahaan u qaadan doonaa aduu dhan 30 million euros.
“Cristiano Ronaldo wuxuu maray tijaabada caafimaadka”…Agaasimahii hore kooxda Juventus Luciano Moggi
Paco Alcácer oo ay saxiixiisa ku dagaalamayaan kooxaha ka dhisan England iyo Portugal